Global Voices teny Malagasy » Fampahalalam-baovao An’olo-tsotra: Ahoana No Hampafantarana Amin’ny Olona Ny Lahatsarinao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Jolay 2014 2:48 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Morris Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Tari-dalana Fampidirana Lahatsary . Fitaovana mahasoa ho anao ity tari-dalana ity raha-te hahafantatra ny fomba ahafahanao mampiditra ny lahatsarinao ao anatin'ireo endrika fizarana isan-karazany ivelan'ny aterineto sy anatin'ny aterineto ianao (DVD, lahatsary antserasera, sns).
Tari-dalana hoan'ireo Habaka Hizarana Lahatsary . Mandinika tsara ireo habaka misy sy malaza, mpampiantrano lahatsary (YouTube, Vimeo, archive.org, Bambuser) ity toro-lalana ity ary mampitaha azy ireo amin'ny fomba fiasa, safidy manokana sy sokajy hafa ahafahanao misafidy izay ho ampiasaina hizaranao ireo lahatsary antserasera.
Ahoana ho Hikarakarana Fandefasana Horonantsarimihetsika . Iray amin'ireo fomba mahomby hahazoanao mpijery marobe amin'ny lahatsarinao ny fikarakarana fandefasana (fampiatranoana) horontsarimihetsika. Mitondra anao mitety ireo dingana sy fizotry ny fikarakarana ny fandefasana ny horonantsarimihetsikao manokana amim-pahombiazana ity tari-dalana ity. Ankoatra izany, miresaka ny fomba fampidirana ny fandefasana horonantsarimihetsika ho tahaka ny tetikadim-pisoloambava amin'ny hetsika ataonao ity loharanom-pahaizana ity.
Navoaka voalohany  tao amin'ny habaky ny Video4Change ho ny “Fitaovana Telo Vaovao avy amin'ny Tambajotra Video4Change” miaraka amin'ny zon'ny mpamorona Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) ity lahatsoratra ity. Ao anatin'ny sehatra azon'ny daholobe ampiasaina ny sary eo ambony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/06/61440/
 Tari-dalana Fampidirana Lahatsary: https://www.v4c.org/content/video-compression-guide
 Tari-dalana hoan'ireo Habaka Hizarana Lahatsary: https://www.v4c.org/content/guide-video-distribution-sites
 Ahoana ho Hikarakarana Fandefasana Horonantsarimihetsika: https://www.v4c.org/content/how-host-film-screening
 Navoaka voalohany: https://www.v4c.org/en/content/three-new-materials-video4change-network